Raad Raac News Online – Gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar lagu mamnuucay in waddooyinka Muqdisho isticmaalaan gaadiidka waa-weyn
Gaadiidka waaweyn ayaa inta badan waxaa loo adeegsadaa Qaraxyada sida ba’an wax u gumaada, kuwaasoo ay Al-shabaab la beegsato goobaha ay ku kulmaan bulshada iyo xarumaha dowladda, sida dhacday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Laba toddobaad ka hor ayaa Qaraxii ugu saameynta weynaa abid wuxuu ka dhacay isgoyska Zope, kaasoo loo adeegsaday gaari noociisu ahaa TM oo ay horay u istimcaali jireen ciidamadii millateriga Soomaaliya, waxaana ku naf-waayay qaraxaa dad ka badan 350-qof, iyadoo dhaawucuna uu dhaafay 400 oo qof.
“Baabuurta Booyadaha ah ma mari karaan magaalada gudaheeda maalintii laga billaabo 07-da subaxnimo illaa 08-da Fiidnimo,” ayaa lagu yiri wareegto kasoo baxday xafiiska maamulka gobolka.
Maamulka Gobolku ma aysan cadeyn in arrintaan lala xiriirinayo Qaraxyada loo adeegsado gawaarida waa-wayn iyo in kale, laakiinse waxay sheegaan in tallaabadan looga gol-leeyahay xaqiijinta ammaanka Muqdisho.
Sidoo kale, Wareegtada kasoo baxday maamulka Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in amarkaan lagu yareynayo ciriiriga Waddooyinka caasimadda iyo in laga jawaabayo cabashooyin ka yimid shacabka ku nool caasimadda.
“Gaadiid xamuulka qaada laguma rari karo tan ka badan culeyska gaariga, maadaama xamuulka xad-dhaafka ah uu dhibaato ku yahay Shacabka iyo gaadiidka waddooyinka la wadaagaya,” ayaa mar kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka gobolka.
Dhanka kale, Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ka qaadayaan darawallada wada gaadiidka xamuulka ah haddii ay amarkan jabiyaan lacag ganaax ah oo gaaraysa 10-milyan oo shillin Somali ah oo noqonaysa $400.
Ugu dambeyn, Maamulka Gobolka ayaa sheegay in wareegtadan lagu baahin doono Warbaahinta muddo seddex maalmood ah si shacabka loo baraarujiyo isla markaana ay u wada ogaadaan xeerkan.